Myanmar Travel Agency - Shan Yoma Travel & Tours Company Ltd. from Myanmar (formerly Burma)
မိတ်ဆွေခရီးသွားမည်ဆိုလျှင် ရှမ်းရိုးမခရီးသွားလုပ်ငန်းကို သတိရလိုက်ပါ။ဘုရားဖူးခရီးစဉ်များ၊ အပန်းဖြေခရီးစဉ်များအတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်ရန်အကြံဥာဏ်များပေးခြင်း၊ ခရီးစဉ်များဆွဲပေးခြင်းတို့ကို အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့်အပြင် လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
(၁) မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ခရီးစဉ်များကိုလည်း စိတ်တိုင်းကျစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(၂) ပြည်တွင်းဟိုတယ်များတွင် အခန်းစီစဉ်ပေးခြင်း၊
(၃) ပြည်တွင်း / ပြည်ပ လေယာဉ်လက်မှတ်များအား ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ရောင်းချပေးခြင်း၊
(၄) မြို့တွင်း / မြို့ပြင် ကားစီးလုံးငှားရမ်းပေးခြင်းစသည့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို သင့်တင့်မျှတသော ၀န်ဆောင်မှုနှုန်းထားများရယူ၍ အကောင်းဆုံးနှင့် အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
ရန်ကုန်-ငွေဆောင်-ရန်ကုန် (နှစ်ညအိပ် သုံးရက်ခရီး)
အပတ်စဉ် သောကြာနေ.တိုင်း ရန်ကုန်မှ ငွေဆောင်သို. ထွက်ခွာပါမည်။ ငွေဆောင် Emerald Sea Resort တွင် စနေနေ.ည တစ်ည အိပ်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ.လည်းပိုင်း ရန်ကုန်သို. ပြန်လည် ထွက်ခွာ မည်ဖြစ်သည် ။ အပြန်ခရီးတွင် ပုသိမ်မြို.သို. ခေတ္တ ၀င်ရောက်ပြီးမှ ထွက်ခွာမည်ဖြစ် ပါသည် ။ ခရီးသည် (၄) ဦးမှစ၍ စတင် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည် ။ မိသားစုများ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၊ အခြား နိုင်ငံတကာ အဖွဲ. အစည်းများ မှ ၀န်ထမ်းများ နှင်. သီးသန်. အပန်းဖြေ ခရီးထွက်လို သူများ အတွက်လည်း အထူးစီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
Ngwe Saung (3 Days2Night - From Friday to Sunday)Tours Program
Myanmar Kyats per person
4-5Pax
ကျွန်တော်တို. ရှမ်းရိုးမကုမ္ပဏီမှ အခြားဝန်ဆောင်မူများဖြစ်သော ဟိုတယ်ခန်းများစီစဉ်ပေးခြင်း ၊ စားသောက်ဆိုင်များ စီစဉ်ပေးခြင်း၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ လေယာဉ်လတ်မှတ်များ ရောင်းချပေးခြင်း ၊ ခရီးစဉ် အမျိုးမျိုးအတွက်ကားများစီစဉ်ပေးခြင်း နှင်.ပြည်တွင်းပြည်ပ အလည်အပတ် ခရီးစဉ်များ အားလုံးတို.လည်း လူကြီးမင်းများစိတ်ကြိုက်စီစဉ် ဆောင်ရွက် ပေးလျှက်ရှိပါသည်။လူကြီးမင်းများ ခရီးသွားလာရေး အဆင်ပြေချော.မွေ.စေရန် အစစအရာရာ အားလုံးကို ကျွန်တော်တို. ရှမ်းရိုးမ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ One Stop Services ဖြင်. တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။
Shan Yoma Travel & ToursTel: 295510, 299389, 204152, 9010379, 9010380, 9010381, 9010382
(959) 73142885, 73142886, 73142887, 73142898, 5115371Fax: (951)299389, 295510Add: 124/126, 50th Street, Pazundaung Tsp, Yangon, Myanmar.Email: info@exploremyanmar.com
ရှမ်းရိုးမခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွားများအတွက် ၀န်ဆောင်မှုများ အနေဖြင့် ဟိုတယ်၊ ကားနှင့် လေယာဉ် လက်မှတ်များအပြင်၊ အခြားဝန်ဆောင်မှုများကို လည်း စိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။